दावाफुटी शेर्पा स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस हुनुको त्यो 'राज' | Citizen Post News
काठमाडौं । पासाङ लामु माउन्टेनियरिङ फाउण्डेसन २६ बर्षअघि प्रथम नेपाली महिला सगरमाथा आरोही पासाङ ल्हामु शेर्पाको स्मृतिमा स्थापाना भएको गैरसरकारी संस्था हो । प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख सम्माननीय दमननाथ ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा स्थापना भएको थियो ।
उक्त संस्थाको ढुङ्गानाले दुई कार्याकाल अध्यक्षको हैसियतमा काम गरे । त्यसपछि रामहरी जोशीले संस्थाको अध्यक्षता ग्रहण गरे । जोशीले उक्त संस्थाको तीन् कार्यकाल अध्यक्षको हैसियतले काम गर्दैगर्दा उनी झ्वाट्ट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने । त्यसपछि त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रमेशराज कुँवरले संस्थाको नेतृत्व सम्हाले ।
सोही बिचमा उनी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा बिभागीय प्रमुखमा पदोन्नोति भए । त्यसपछि उक्त संस्थाको अध्यक्षता कृपासुर शेर्पाले ग्रहण गरे । संस्थाको अध्यक्ष नेतृत्व गरिरहेकै बेला उनी भोजपुर क्षेत्र नं. १ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसलगत्तै शेर्पाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरे ।
त्यसपछि ०७६ बैशाख १२ गतेको साधारणसभाबाट राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्हामु शेर्पाकै जेठी छोरी सुश्री दावाफुटी शेर्पालाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष पदको नेतृत्व हस्तान्तरण भएको थियो । हालै उनी पनि संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले नियुक्तीका लागि योग्य ठहराई स्पेनको लागि राजदूतमा सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त निर्णयसँगै उनी अब स्पेनका लागि महामहिम अर्थात राजदूत नियुक्ती हुने पक्का छ ।
सो अवसरमा पूर्व पर्यटनमन्त्री एवम् पासाङ ल्हामु माउन्टेनियरिङ फाउण्डेसन पूर्वअध्यक्ष केपासुर शेर्पाले उनलाई हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालका लागि शुभकामना समेत दिएका छन् । शेर्पाका अनुसार गत ०७२ सालमाम आएका आमविनाशकारी महाभूकम्पका बेला तत्कालिन नेकपा एमालेको पार्टी भवन बस्न योग्य नभएपछि अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै प्रतिष्ठानकै कार्यालयमा भवन सार्ने काम भएको थियो ।
प्रतिष्ठानको कार्यालयमा नेकपाको पार्टी कार्यालय सारेपछि थप सुःखद समाचार आयो । त्यो हो-एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसपछि आमनिर्वाचनमा दुई ठूला कम्यूनिष्ट दल एमाले र माओवादीबिच तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि अहिले दुई तिहाइको बहुमतसहित नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
अहिले नेकपाले राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न सफल भएको छ । सरकार सुखी नेपाली, सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढीरहेको छ । शेर्पाका अनुसार प्रतिष्ठानकै कार्यकारी सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटा पनि संचार सूचना तथा प्रबिधिमन्त्री एवम् सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।
संस्थाका अधिकांश कार्यकारी सदस्यहरु ब्यवसायिक रुपमा आवद्ध रहेका छन् भने बाँकी सदस्यहरुलाई पनि स्थानिय सरकारमा सहभागि हुने अवसर मिलिरहेको छ । अहिले ०७६ बैशाख १२ गतेको साधारणसभाले प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीबाट बिदा दिई दावाफुटी शेर्पाको अध्यक्षतामा साधारण सदस्य मध्येबाट नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार उक्त संस्थामा आवद्ध भएका हरेक ब्यक्तिलाई लाभ तथा सुःख प्राप्त हुनुको पछाडि एउटै कारण छ-त्यो हो उक्त प्रतिष्ठानको भवन वास्तु बिधीअनुसार निर्माण गरिएको छ । उक्त संस्थामा रहने र जिम्मेवारी पाउने सवैलाई विशेष जिम्मेवारी र सुखद अनुभूति हुने अवसर मिल्ने गरेको शेर्पाले बताए । जसको एक मात्र कारण उनले वास्तुविधि अनुसार भवनको निर्माण हुनुलाई नै मानेका छन् ।